Ahoana ny fomba famolavolana ny fonony aloha sy aoriana amin'ny bokinao | Famoronana an-tserasera
Raha tonga hatreto ianao dia mety misy antony roa: satria mpanoratra ianao ary maniry izany volavola ny fonony izay vao nosoratanao; na satria nangatahina tamina endrika ho mpamorona takelaka boky ianao ary tsy tena hainao ny mampiaraka an'ity tetik'asa ity.
Na izany na tsy izany, tsotra ny fizotrany, saingy misy lafin-javatra sasany izay tsy maintsy raisina mba tsy hianjera amin'ny lesoka na tsy fahombiazana, izay taty aoriana, rehefa vita pirinty ireo boky dia endrika (ary fotoana) very maina. Tianao hiresaka aminao momba izany ve izahay?
1 Ny fonon'ilay boky
2 Ny angona ilaina amin'ny fonon'ny boky sy ny fonony aoriana
3 Volavola ny fonony aloha sy aoriana ao amin'ny bokinao
3.1 Ataovy misaraka ny fonony aloha sy aoriana
3.2 Mampiasà programa sahaza
3.3 Araho maso ny fandrefesana
3.4 Sary sy endritsoratra mifanaraka amin'ny boky
Ny fonon'ilay boky
Ny fonon'ilay boky angamba no iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra any. Ataovy ao an-tsaina fa ny mpamaky matetika tsy mijanona mijery ireo boky rehetra ao amin'ny fivarotam-boky, fa mifantoka amin'ireo izay mahasarika ny sainy fotsiny. Ary eo no miditra ilay fonony.
Ity iray ity Tsy maintsy mahasarika olona izy io ka ny olona, ​​raha mahita azy, dia tsy afaka miala amin'ny fakana ilay boky ary diniho akaiky kokoa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fonon'ny boky no fiheverana voalohany hataonao amin'ny mpamaky.
Noho izany, ilaina ny mandoa vola fiheverana betsaka amin'ny antsipiriany hahazoana setia azo ekena. Ary tsy maintsy mampiavaka azy ny:
Mifandraisa amin'ilay boky ao anatiny: tsy afaka mametraka saron-tava ianao raha momba ny alika ny tantaranao.
Ataovy mazava sy azonao tsara: raha mametraka teboka mainty eo am-pototry ny fotsy ianao dia tsy ho fantatry ny olona hoe inona no tondroin'ny bokinao, inona ny karazana haisoratra ary aolin'izy ireo izany.
Manana ny angon-drakitra rakotra boky rehetra: ary inona ny angona izany? Hiresaka momba azy eto ambany izahay.
Ny angona ilaina amin'ny fonon'ny boky sy ny fonony aoriana
Na ny fonony na ny fonony aoriana ao amin'ny bokinao dia tsy maintsy mitondra fanazavana vitsivitsy izay averimberina ao amin'ny boky rehetra, ary ny fanaovana tsinontsinona azy ireo dia mety hampidi-doza (satria tsy mitovy izy ireo, dia mety tsy sahy mividy azy).
Raha ny fonony, ny antontam-baovao tokony hananany dia: ny anaran'ny mpanoratra sy ny lohatenin'ilay boky. Tsy misy intsony. Betsaka ny mametraka dikanteny na andian-teny avy amin'ny tantara, saingy tena mila izany fampahalalana roa izany ianao.
Ny anaran'ny mpanoratra dia satria tsy maintsy fariparinao hoe iza no nanoratra azy (iza no olona ao ambadik'io tantara io) sy ny lohateny hahafahana mampifantoka izay mahita azy amin'ny karazana raketin'io boky io.
Ahoana raha fonony aoriana? Eto dia misy fahalalahana kely kokoa, fa amin'ny ankapobeny dia misy: synopsis ny tantara, kaody barcode miaraka amin'ny ISBN ao amin'ny boky, ary safidy hafa, tantaram-piainan'ny mpanoratra.
Zava-dehibe ny famintinana ny boky, ho famintinana ny tantara voalaza ao, na tantara foronina na tsy foronina. Ho fanampin'izay, ny kaody ISBN (soloina kaody bara) dia tena ilaina mba hahafahana mivarotra ara-batana ireo boky.
Ary farany, ny tantaram-piainan'ny mpanoratra dia tsy voatery. Misy ireo manapa-kevitra hametraka azy ary ireo izay mampiasa ny iray amin'ireo pejy anatiny hanaovana azy.
Volavola ny fonony aloha sy aoriana ao amin'ny bokinao
Ary efa nilaza taminay ny maha-zava-dehibe ny fonony aloha sy aoriana ao amin'ny bokinao izahay, ary koa ny angona izay tsy maintsy ampidirinao ao amin'izy ireo tsirairay avy, tonga ny fotoana hanombohana ny famolavolana azy ireo. Fa ahoana no hanaovana azy?
Ataovy misaraka ny fonony aloha sy aoriana
Manoro hevitra anao izahay mba hataonao misaraka. Izany hoe mamorona rakitra sary ianao izay fonony ary iray hafa ilay fonony aoriana.
Ary izany dia satria, raha hampakatra azy amin'ny fomba nomerika ianao dia tsy mila fonony aoriana, fa ny fonon'ny boky ihany no apetrakao. Raha manana sary iray miaraka amin'izy roa ianao dia tsy ho tsara tarehy ary hanome sary ratsy ianao.
Mampiasà programa sahaza
ny programa izay tokony hampiasainao hanao izany dia programa fanovana sary, satria tsy maintsy afangaronao, atambaro ary alao ny sary sy ny lahatsoratra (ho an'ny anaran'ny mpanoratra sy ny lohateny) mba ho voarindra sy misy kalitao hatao pirinty ny zava-drehetra. Raha ataonao amina programa tsy fanovana sary izany dia "hanimba" ny kalitao ary rehefa hanao pirinty dia tsy hivoaka tsara.
Raha tsy mahay ianao dia tsara kokoa ny manakarama manam-pahaizana. Miresaka lohahevitra lehibe iray lehibe izahay izay mety hanimba ny fivarotanao boky, ary tsy afaka hilalao azy ianao. Fa raha manam-pahaizana ianao, na mahay azy dia tohizo.
Araho maso ny fandrefesana
Manoro hevitra izahay fa, rehefa manamboatra ny fonony aloha sy aoriana dia ataonao mifototra amin'ny habeny tokony ho nofenoinao, izany hoe, ny fonony aloha, ny hazondamosina ary ny lamosina. Amin'ny Internet dia azonao atao ny mahita maodely ho an'ity mifototra amin'ny haben'ny bokinao, na manana flaps io na tsia. Azonao atao ny mitarika ny tenanao miaraka amin'izy ireo ary avy eo mizara ny ampahany tsirairay. Ho fanampin'izay, ny sary dia tokony ho azo amin'ny kalitao sy habe tsara indrindra. Tsara kokoa ny mampiasa ireo izay lehibe ka mahatonga azy ireo ho kely kokoa noho ny mifanohitra aminy, izay pixelated.
Sary sy endritsoratra mifanaraka amin'ny boky
Miezaha foana misafidy sary sy karazana endritsoratra mifanaraka amin'ny karazana boky. Ary, raha azo atao, izy ireo dia misy ifandraisany amin'ilay tantara; hatrizay ilay olona mahita an'io dia ho afaka hahafantatra hoe inona izany amin'ny fijerena ilay sary fotsiny.
Eny, andramo ny tsy hampihoatra ny fonony. Manoro hevitra ny manam-pahaizana fa tsy mihoatra ny 3 ny karazana fontsoratra mifangaro eo amin'ny fonony aloha sy aoriana, ary tsy tokony haingo loatra ny sary na ny sary firakotra satria afaka manome fandavana (na ny fahatsapana fa korontana izany ary tsy ho azony ilay boky ). Indraindray kely kokoa no betsaka amin'ireo tranga ireo.
Amin'ny ankapobeny, rehefa mamolavola rakotra boky sy fonony any aoriana izy, ny tokony hatao voalohany dia ny famoronana sy ny sary. Miankina amin'ny karazany, tsy maintsy misafidy karazana fonosana iray ianao na hafa, ary izany dia hahatonga anao hahazo dikanteny hafa. Ny tolo-kevitray dia ny hanaovanao fonony maro sy hizahan-toetra azy ireo. Azonao fantarina hoe iza amin'izy ireo no marina indrindra amin'ny tantaranao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Ahoana ny famolavolana ny fonony aloha sy aoriana amin'ny bokinao
Ahoana ny fomba fanesorana pejy amin'ny PDF miaraka amin'ireo fitaovana maimaimpoana ireo